Fandikana ny fitsipika fivezivezena :: Mpiasa maromaro naiditra fonja kely • AoRaha
Tsy mitsahatra ny fisamborana ireo olona mbola sahy mivezivezy amin’ny alina eto an-drenivohitra sy ny faritra Analamanga. Tato anatin’ny andro vitsy izay dia ampolony maro ireo olona nosamborin’ny polisy sy ny zandarimaria. Isan’izany ireo mpiasan’ny orinasa iray misahana ny fifandraisan-davitra. Naiditra am-ponja kelin’ny mpitandro filaminana ireo mpiasa tsy nanaja ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina ireo.
Avy niasa no nikasa andeha hody izy ireo, araka ny loharanom-baovao. Tsy manana fahazoan-dalana ahafahan’izy ireo manohy ny asany anefa izy ireo rehefa nosavain’ireo mpitandro filaminana ka notazonina naiditra trano mihiboka avy hatrany. Ny tompon’ andraikitr’ilay orinasa nampiasa azy ireo no naka ireo mpiasa tany amin’ny mpitandro filaminana, ny ampitso maraina.
« Manao antso hatrany izahay ny amin’ny tokony hanajana ny fepetra apetraka. Fiarovana ny ainao sy ny ain’ny olona mifanerasera aminao no anton’ireny fepetra ireny. Voatery izahay mandray fepetra mifanaraka amin’izay rehefa tsy azo tenenina moramora isika », hoy ireo mpitandro filaminana avy amin’ny zandarimaria sy ny polisy.
Navotsotra avokoa ireo olona am-polony maro voasambotra tao anatin’ny andro vitsy ireo. Nomena fampitandremana izy ireo mba tsy hamerina amin’ ny manaraka, araka ny voalazan’ny polisy sy zandary.
Mbola tena ezaka goavana mihintsy no ilaina amin’ny fiovan’ny toen-tsaintsika Malagasy mba hahay hankatoa sy hanara-dalana @zay raha maniry fiainana mamiratra fa ny fanaovana lalan-dririnina efa tsy ilaina intsony
Vaky trano tany Fianarantsoa ::Solosaina sy fitaovana maro voaroba tao amin’ny biraon’ny Cisco